कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असोज २ गते) – इन्सेक
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (असोज २ गते)
काठमाडौँ ०७७ असोज २ गते
असोज २ गते २ हजार २० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६१ हजार ५ सय ९३ पुगेको छ । गत २४ घण्टामा ११ हजार ४ सय ५८ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको स्थिति प्रतिवेदन अनुसार असोज २ गतेसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण ३ सय ९० जनाको मृत्यु भएको छ । सङ्क्रमितमध्ये ४३ हजार ८ सय २० जना डिस्चार्ज भएका छन् । असोज २ गते ८ सय ७१ जना डिस्चार्ज भएका छन् भने निको दर ७१.१ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । १७ हजार ३ सय ८३ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
मोरङ प्रतिनिधि नेत्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार समुदायस्तरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको विराटनगर महानगरपालिकामा अधिकांश कोरोना भाइरस सङ्क्रमित घर मै बसेका छन् । आइसोलेशन बेड अभावमा घरमै बस्न बाध्य भएका कोरोना भाइरस सङ्क्रमितसँग महानगरपालिकाले प्रभावकारी समन्वय गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले होम आइसोलेशनमा बसेका कोरोना भाइरस सङ्क्रमितलाई दैनिक दुई पटक सम्पर्क गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । तर विराटनगरमा भने एक पटक सम्पर्क गर्न पनि मुस्किल छ । विराटनगर महानगरपालिका-३ का एक जना कोरोना सङ्क्रमित फोन सम्पर्कमा 'कहिलेकाहीँ फोन आउने मात्र बताउनु भयो । उहाँले 'गाहृो पर्‍यो भने फोन गर्नु भन्छन्, तर कसलाई भन्ने केही जानकारी दिँदैनन् ।' 'नगरपालिकाका प्रतिनिधिले एक पटक फोन गर्छन् । घरमा बस्नका लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर सोध्दैनन् ।' महानगरपालिकामा ७ सय २६ जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित होम आइसोलेशनमा छन् । होम आइसोलेसनमा भएका सङ्क्रमितलाई नियमित सम्पर्क गरिरहेको विराटनगर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य निरीक्षक दीलिप यादवले बताउनु भयो ।
झापा प्रतिनिधि नरेश खातीका अनुसार झापा गाउँपालिका-६ सन्थाल वस्ती सील गरिएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएकी एक जना महिला वस्तीमा प्रवेश गरेपछि वस्ती नै सील गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्ष्मण विश्वकर्माले बताउनु भयो । साउन २६ गतेदेखि वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा क्यान्सर रोग लागेर उपचाररत महिलामा असोज १ गते अस्पतालले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि घर पठाएको थियो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सूचना बिना सङ्क्रमित महिला आफ्नो घर रहेको वस्तीमा प्रवेश गरेपछि जोखिम नियन्त्रणका लागि वस्ती नै असोज २ गतेबाट सील गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विश्वकर्माले बताउनु भयो । असोज २ गते भरतपुर अस्पतालबाट घर आएका सङ्क्रमित महिला र उहाँका छोरालाई झापा गाउँपालिकाको होल्डिङ सेन्टरमा पठाइएको छ ।
यस प्रदेशमा असोज २ गते काठमाडौँमा ६ सय ९८, चितवनमा १ सय ९१, भक्तपुरमा ८४, ललितपुरमा ७९, मकवानपुरमा ३०, काभ्रेपलान्चोकमा १२, धादिङमा नौ, रामेछाप र नुवाकोटमा ६/६, सिन्धुपाल्चोक तीन, दोलखा र सिन्धुलीमा एक/एक, जना गरी १ हजार १ सय २० जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै प्रदेशमा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या १९ हजार ४ सय ४२ जना पुगेको छ । जसमध्ये ९ हजार ७ सय ५१ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने ९ हजार ५ सय ३९ जनाको विभिन्न अस्पताल तथा आइसोलेशन सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । थप चार जनाको मृत्यु भएसँगै यस प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १ सय ३२ जना पुगेको छ ।
चितवन प्रतिनिधि दिपेन्द्र अधिकारीका अनुसार जिल्लामा एकै दिन २ सय १२ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । असोज १ गते चितवन मेडिकल कलेजमा गरिएको परीक्षणमा २ सय ४ र भरतपुर अस्पताल कोभिड-१९ प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । चितवन मेडिकल कलेज ल्याबमा सोही अस्पतालबाट सङ्कलन गरिएको स्वाब र भरतपुर अस्पतालले पठाएको स्वाब गरी ६ सय ५३ ओटा नमूना परीक्षण गरिएको थियो । यसैबीच, कोरोना भई उपचाररत ५५ वर्षीय पुरुषको असोज २ गते भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी लिलाधर पौडेलले बताउनु भयो । यसैगरी चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचाररत ३१ वर्षीय पुरुषको असोज १ गते मध्यराति मृत्यु भएको अस्पतालका निर्देशक प्रा. डा. दयाराम लम्सालले बताउनु भयो ।
रामेछाप प्रतिनिधि नवराज पथिकका अनुसार जिल्लामा पुनः असोज १ गतेबाट निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले असोज १ गते एक सूचना जारी गरी सो घोषणा गर्नुभएको हो । जारी सूचना अनुसार शैक्षिक संस्था विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र तथा परीक्षा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । सबै प्रकारका तालिम, सभा, गोष्ठी, बैठक, भेला, सेमिनार, प्रदर्शन तथा सम्मेलन गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसैगरी सिनेमाहल, पार्टीप्यालेस, बार, व्युटीपार्लर, सैलुन तथा स्पा सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ । साथै पुस्तकालय तथा हाटबजार सञ्चालन, आन्तरिक नित्य पूजा बाहेक धार्मीक तथा सामाजिक कार्यमा पनि प्रतिबन्ध यथावत छ । त्यस्तै सहकारीको बचत सङ्कलनमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले इन्सेक प्रतिनिधिलाई बताउनु भयो ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेका अनुसार ०७७ असोज २ गते कोरोना सङ्क्रमणबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) देवचुली नगरपालिका- ११ का ३१ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । श्वासप्रश्वास र निमोनियाको समस्या भएपछि भदौ २५ गते अस्पताल भर्ना भएका उनको भदौ २६ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । उनको सघन उपचार कक्षमा भेण्टिलेटरमा राखी उपचार गर्दा गर्दै चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा असोज २ गते बिहान मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद चापागाईंले बताउनु भयो । यो सँगै जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ६ पुगेको चापागाईले बताउनु भयो ।